အရှင်နာဂ၀ံသာလင်္ကာရမှ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုပါတယ်
Two moons on 27th August 2010
27th Aug the Whole World is waiting for......... ....
Planet Mars will be the brightest in the night sky starting August. It will look as large as the full moon to the naked eye. This will cultivate on Aug. 27 when Mars comes within 34.65M miles off earth. Be sure to watch the sky on Aug. 27 12:30 am. It will look like the earth has2moons.
The next time Mars may come this close is in 2287.
Share this with your friends as NO ONE ALIVE TODAY will ever see it again.
Posted by yankin at 8:33 AM No comments:
ရှမ်းပြည်နယ် ကျောက်မဲမြို့ သီဟိုဠ်ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်နှင့် မန္တလေးတိုင်း ပြင်ဦးလွင်မြို့ ဇယမေဒနီမဟာအောင်မြေကျောင်းတိုက် ကြီး၏ နာယကချုပ်ဆရာတော် နိုင်ငံတော် ဗဟိုသံဃာ့ဝန်ဆောင် ဆရာတော် ဦးစန္ဒနသာရ(ဓမ္မာစရိယ+၀ိနယဓရ၊B.A.(မြန်မာ)M.A.(သီရိလင်္ကာ)သည်..ယနေ ၂၀၁၀ခုနှစ်၊ သြဂတ်စ် (၂၆)ရက် နေ့၌ အိန္ဒိယနိုင်ငံ မဟာရရှတ်တရပြည်နယ် ဘုံဘေမြုိ့အနီး ပုနေမြို့ ပုနေတက္ကသိုလ်တွင် VIVAထိုင်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါ၍ Ph.D ဒေါက်တာဘွဲ့ကို ဆွတ်ခူးရရှိသွားပြီဖြစ်ပါသည်...ဆရာတော်သည် မန္တလေးတိုင်း မတ္တရာမြို့နယ် စကျင်ရွာဇာတိဖြစ်သည်။ စကျင်ရွာမဟာသိမ်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တတိဿသည် ဆရာတော်၏ ငယ်ဆရာဖြစ်သည်။ မန္တလေးမြို့၊ မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံတိုက်သစ်၊ဇယမေဒနီဝါဆိုကျောင်း၌ ရွှေကျင်သာသနာပိုင် စံကင်းဆရာတော်နှင့် ၀ါဆိုဆရာတော်တို့အထံတွင် အထက်တန်းပိဋကတ်ကျမ်းစာများကို သင်ယူခဲ့ပါသည်...။
ဆရာတော်သည် စကျင်ရွာ မွေပုံကန်ရွာ နတ်ကြီးစဉ်ရွာ လင်ကုန်း ဝေါရွာတို့မှ ကလေးငယ်များအတွက် ၀တ်ရွတ်စဉ်စာအုပ်များ ရိုက်နှိပ်လှုဒါန်းခြင်း..သက်တော်လေးဆယ် ပြည့်စဉ်အခါက စပါယ်ပွင့်အမည်ရှိ စာအုပ်ကိုလည်းကောင်း၊ သက်တော်ခြောက်ဆယ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဇွန်ပွင့်အမည်ရှိစာအုပ်ကို လည်းကောင်း၊ဘာသာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော အထိမ်းအမှတ်စာအုပ်များ၌ ဆောင်းပါးများကိုလည်းကောင်း ပြုစုရေးသားခဲ့ပါသည်... ဆရာတော်သည် An Analytical Study On The First Sermon Of The Buddha ဟူသော စာတမ်းဖြင့် ပုနေးတက္ကသိုလ်မှ Ph.D ဒေါက်တာဘွဲ့ကို ဆွတ်ခူး ရရှိခဲ့ပါသည်..။
Posted by yankin at 5:06 AM No comments:
စွန့်လွှတ်ရေးဆိုသည်မှာ လူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာတို့၌ တပ်မက်ခြင်းကို စွန့်လွှတ်ရ၏..။ရာထူး ဂုဏ်သိန် စည်းစိမ်ဥစ္စာတို့၌ တပ်မက်ခြင်းကို စွန့်လွှတ်၏...။ဓမ္မ၀ါဒထွန်းကားရေး၊လူအဖွဲ့အစည်းငြိမ်းချမ်းရေး တို့အတွက်ဆောင်ရွက်ရာ၌ မိမိအသက်၊မိမိဘ၀၌ပင် တပ်မက်ခြင်းကို စွန့်လွှတ်ရ၏..။အရာရာတိုင်း၌ တပ်မက်ခြင်းကို စွန့်လွတ်ရ၏...။
ရိုးရိုးကုသိုလ်ကို ရိုးရိုးလူသားတို့က တန်ဖိုးထား၏..။မြတ်နိုး၏..။ပါရမီကုသိုလ်ကို မြင့်မြတ်သောလူသား
တို့က တန်ဖိုးထား၏..။မြတ်နိုး၏..။ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓ၀ါဒကို တကယ်ယုံကြည့်သူများဖြစ်ပါက ပါရမီကုသိုလ်
များဖြင့် ဘ၀ကို တည်ဆောက်သူများ ဖြစ်ထိုက်ပါ၏...။
ဗုဒ္ဓဒေသနာတော်အရ ဘ၀ဟူသည် ကြွေးပင်ဖြစ်၏..။ထပ်၍ ထပ်၍ ဘ၀ဖြစ်ခြင်းသည် ထပ်၍ထပ်၍ ကြွေးတင်း ခြင်းဖြစ်၏...။ထို့ကြောင့် ရယူရေးသည် ဘ၀ကို တည်ဆောက်ရာတွင် ရိုးရိုးကုသိုလ်သဘောဖြစ်၏..။ယင်းကို ၀ဋ္ဋနိဿိတ ကုသိုလ်ဟူ၍လည်း ဆို၏...။ စွန့်လွှတ်ရေးသည် ကြွေးဆပ်ခြင်းဖြစ်၍ ပါရမီကုသိုလ်သဘောဖြစ်၏..။ ယင်းကို ၀ိဝဋ္ဋနိဿိတကုသိုလ်ဟူ၍လည်း ဆိုရ၏..။သာမန်အားဖြင့် ရိုးရိုးကုသိုလ်သည် ရခြင်းဖြစ်၍ အပေါင်းသဘော ဆောင်၏..။ပါရမီကုသိုလ်သည် စွန့်လွှတ်ခြင်းဖြစ်၍ အနုတ်သဘောဖြစ်၏....။
သို့ရာတွင် သင်္ချာနည်းအရဆိုသော် ရိုးရိုးကုသိုလ်ရသည် ဆိုသော်လည်း ကြွေးတင်ခြင်းဖြစ်၍ အနုတ်စစ်စစ်ဖြစ်၏..။အရှုံးစစ်စစ်ဖြစ်၏...။ပါရမီကုသိုလ်သည် စွန့်လွှတ်သည်ဆိုသော်လည်း ကြွေးကျေခြင်းဖြစ်၍ အပေါင်းစစ်စစ်ဖြစ်၏....။အမြတ်စစ်စစ်ဖြစ်၏...။
Posted by yankin at 12:32 AM No comments:
အများအကျုိုး၊ရွက်သည်ပိုးက၊ ခနိုးခနဲ့၊ဆိုကဲ့ရဲ့လည်း၊ မဖဲ့မစောင်း၊ကိုယ့်လမ်းကြောင်းကို၊ စိတ်ကောင်းနှင့်ယှဉ်၊ရှေရှု့နှင်လော့...။ (ရွှေဟင်္သာဆရာတော်)
အနန္တမေတ္တာများစွာဖြင့် အားလုံးကို လေးစားပါတယ်
Myspace Clocks, /
အဝေရာရာမ ရန်ကင်းကျောင်းတိုက် နာယကဆရာတော်
အဝေရာရာမ ရန်ကင်းကျောင်းတိုက် သမိုင်းဝင် မော်ကွန်းတင် ကျောက်စာ
Nero Burning 2020
ainprint? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9. 15.
ကြည့်ရှု့ သင့်သော ဓမ္မဆိုက်များ
မန္တလေးမြို့ အဝေရာရာမ ရန်ကင်းကျောင်းတိုက်
ဆေးကျောင်း(တိုက်စိမ်း)နှင့် ဆောက်လုပ်ဆဲ စိန်ခဲ ရွှေခဲ ကျောင်းတော်ကြီး